Madaxweyne Xasan oo sheegay iney diiwan geliyeen biyaha badda Soomaaliya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Madaxweyne Xasan oo sheegay iney diiwan geliyeen biyaha badda Soomaaliya
Mareeg.com: Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud oo shalay la hadlay baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in toddobaadkii hore ay dowladdu diiwaangelisay biyaha badda Soomaaliya oo marka la adeegsado halbeegga lagu cabbiro fogaanta biyaha gaaraya 220 nautical mile.
Madaxweynaha oo maanta ka hadlay xiritaanka kalfadhigii afaraad ee baarlammaanka Soomaaliya ayaa sheegay in Qaramada Midoobay, qeybteeda qaabilsan qawaaniinta badaha ee UNCLOS oo ay xubin ka tahay Soomaaliya ay ka diiwaan geliyeen xadka biyaha Soomaaliya.
Madaxweynaha ayaa sheegay in 21 July 2014 ay dowladda Soomaaliya gudbisay xuduudaheeda biyaha (continental shelf) taasoo ah 350 nautical mile oo biyaha badda ah, isla markaana ay xaq u leedahay jamhuuriyadda Soomaaliya.
Wuxuu tilmaamay madaxweynuhu in Soomaaliya ay maanta leedahay 200 nautical mile (EEZ) Exclusive Economic Zone iyo 350 nautical mile continental shelf, kuwaas oo ka diiwaan gashan Qarammada Midoobey.
“Soomaaliya waxay leedahay badda ugu ballaaran qaarada Afrika, biyaha dalkeenna waxay ka badan yihiin baaxada dhulka Soomaaliyeed. Waxaanna nagu waajib ah Iilaalinta biyaha Soomaaliya. Xuquuqda ummad walabi waxaa lagu ilaashadaa sharuucdeeda iyo sharuucda caalamiga Soomaaliyana waxay xubin ka tahay dalalka saxiixay heshiska baddaha caalamiga. Isbuucii la soo dhaafay waxay Dowladda Soomaaliyeed diiwaangashatay 350 nautical miles oo ah biyaheenna xaqa aanu u leenahay’ ayuu yiri Madaxweyne Xasan Sheekh.
Xasan Sheekh ayaa xusay in aysan jirin wax dacwo ah oo ay qabto dowladda Soomaaliya, islamarkaana ay dowladdu ka ilaalisay biya gooleedka daka iney dayacmaaan.
“Intaas haddii aanan sameyn waxaa dayacmi lahaa biyaheenana, sidaad ogtihiin in biyaheena wasaq lagu shubo, si sharci dara ah looga kaluumeysto, Waxaa masuul ka ahayd maqnaashaha aarintaas. documenti-yada iyo qariidadihii la gudbiyeyna Baarlmaanka ayaa la horkeeni doonaa” ayuu sidoo kale yiri madaxweyne Xasan Sheekh.
Hadalka madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa soo afjaraya hadallo iyo muran ka jirey xuduudaha badda ee Soomaaliya, kaasoo ay ku orkacsanayeen siyaasiyiin xildoon ah.